2mztaunggyi: Samsung Galaxy Note3 မကြာမှီထွက်ရှိတော့မည်.
Samsung Galaxy Note3 မကြာမှီထွက်ရှိတော့မည်.
ကျွှန်တော်တို့ အရင် Note2 ရဲ့ မော်ဒန် N7100 နဲ့ထွက်ရှိထားပြီးတော့အခု Note3မှာ N7200
နဲ့ထွက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။Full HD (1920 x 1080 resolution) ပါရှိတဲပအတွက်ဖန်သားပြင်ကိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.
Android Version ကတော့ 4.2.2 ကိုအသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ 13-megapixel sensor ၊
1600MHz processor ပါရှိမယ်။သူရဲ့ မျက်နှာပြင်ကတော့ 5.9-inch ဖြစ်ပြီး OLED displayကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးGermany နိုင်ငံထုတ် officials
ဖြစ်ပါတယ်။ Exynos5Octa CPU နဲ့ 3GB of RAM ပ်ါရှိပါမယ်။ data သီမ်းစည်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားကတော့
32GB of storage ဖြစ်ပါတယ်။ Sd ကဒ်ကိုလဲထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။
Smaung S4 ကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်အတွင်းမှာဝယ်ယူအားကတော့ 10 million ရှိသွားပြီလို့
ပြောထားပါတယ်/ Galaxy S4 ကတော့ 5-inch display, Exynos 5450 processor နဲ့ထွက်ရှိထားပြီး
ယခု Note3မှာ 5.99-inch display, Exynos5Octa CPU နဲ့ထွက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်.
ကယ်ကျွှန်တော်တို့ Galaxy Note3ကိုဘယ်ချိန်မှာဘယ်လိုဈေးနှုန်းလဲထွက်ရှိလာမလဲဆိုတာ
Ref; Android News
Credit to minzarni တောင်ကြီး